NextMping | Yakavanzika Policy
Synthesis ku Work Inc., dba Cheryl Cran uye NextMapping haunganidze chero ruzivo pachako runoratidza nezvewe paunoshanyira Webhusaiti yedu kunze kwekunge iwe uchizvipira kupa ruzivo urwu, semuenzaniso nekutibata nesu kuburikidza nemafomu edu email, kusanganisira kutitumira mibvunzo. Isu hatigovane ruzivo rwako nechero batatu rekunze kwesangano redu, zvimwe zvisina basa kuti uite odha yako.
Unogona kusarudza kubva kune chero ramangwana kutaurirana kubva kwatiri chero nguva. Iwe unogona kuita zvinotevera chero nguva nekutibata nesu kero yeemail kana nhamba yefoni yakapihwa pawebsite yedu. Ruzivo rwako pachako runounganidzwa mune idzi zviitiko zvinogona kusanganisira zita rako, kutaurirana, kero yeemail, uye nhamba yefoni. Hatimbofa takagovana kana kutengesa ruzivo rwako pachako kuna ani zvake.
Chero mibvunzo inofanirwa kutungamirirwa ku: info@nextmapping.com